बिमा फाइदा होइन, सुरक्षा हो:मुना कुँवरको बिस्लेषण – Insurance Khabar
बिमा फाइदा होइन, सुरक्षा हो:मुना कुँवरको बिस्लेषण
प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०७५, शनिबार १७:११
जोखिम चारैतिर छ । भूकम्पीय दृष्टिकोणले नेपाललाई विश्वकै अति जोखिमयुक्त देश मानिन्छ । बाढी–पहिरो, विभिन्न खालका रोग, महामारी, दुर्घटनाले बर्सेनि धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । अर्थात्, हामी कुनै पनि समय दुर्घटनाको सिकार हुन सक्छौँ । झन् अहिले त प्रविधिको विकाससँगै नयाँ खालका जोखिमको सिर्जना भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हुन सक्ने आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न अपनाइने सुरक्षाकवच नै बिमा हो ।
जीवन र निर्जीवन गरी बिमा दुई प्रकारका हुन्छन् । जीवित व्यक्तिको बिमा जीवन बिमा हो भने भौतिक सम्पतिको बिमा निर्जीवन बिमा हो । मानिसले आफ्नो आर्थिक अवस्था र जोखिमको अवस्थालाई हेरेर बिमा योजना खरिद गर्न सक्छन् ।
किन गर्ने बिमा
कुनै पनि जोखिमले दिने पीडा लामो समयसम्म रहिरहन्छ । त्यस्तो जोखिमबाट आर्थिक राहत पाउन बिमा गर्नुपर्छ । त्यसो त मानिसले आफ्नो मृत्युका बारेमा सन्न मन पराउँदैनन्, तर यसो भन्दैमा मानिस अमर पनि रहँदैन । कतिपय मानिस आफ्नो मृत्युपछि अरूका लागि किन सोच्ने भन्ने तर्क पनि राख्छन् ।
नेपालको परिवेशमा एकजना व्यक्तिको आम्दानीले पाँचजना व्यक्ति पालिन्छन् । यदि आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई केही भयो भने आश्रित परिवारको हालत के होला ? यस्तो सोचेर पनि आफूमा आश्रित व्यक्तिको लागि बिमा गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
जीवन बिमा योजना
जीवन बिमा योजनाले मानिस जीवित रहँदा तथा नरहँदा पनि आर्थिक सुरक्षा दिन्छ । बिमाको प्रकृतिअनुसार बिमा अवधि सकिएपछि बिमितले बिमांक रकम र उक्त अवधिको बोनस रकम प्राप्त गर्छ । त्यस्तै, यदि बिमा अवधिभित्रै बिमितको मृत्यु भयो भने आश्रित परिवारले बिमांक रकम प्राप्त गर्छ । जसका कारण मानिस नरहँदा पनि उसको परिवारले आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्छ । त्यस्तै अशक्तता भएको समयमा पनि कम्पनीले बिमितलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
निर्जीवन बिमा योजना
निर्जीवन बिमा योजनाले भौतिक सम्पत्ति नष्ट वा क्षतिग्रस्त भएमा क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्तो बिमाले कुनै कारणवश सम्पत्ति क्षति भएमा मानिस सडकमै आउनुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउँछ ।
बिमा योजना खरिद गरेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू :
१. कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्कली बिमा योजना आवश्यक पर्छ । तसर्थ, कम्पनीबाट प्राप्त बिमा योजनालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । यसका बारेमा परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि जानकारी दिनुपर्छ । ताकि, तपाईंलाई केही भएमा उनीहरूले भुक्तानी लिनु सकून् ।
२. बिमा योजनामा आफ्नो आधिकारिक नाम, उमेर र ठेगाना लेखाउनुपर्छ । यदि नागरिकताको नाम र घरमा बोलाउने नाम फरक छ भने दुवै स्पष्ट रूपमा बिमा प्रस्ताव फाराममा उल्लेख गराउनुपर्छ । कहिल्यै पनि नाम वैकल्पिक मात्रै उल्लेख गर्नुहुँदैन । अन्यथा पछि दाबी भुक्तानी लिन कठिन हुन्छ ।
३. बिमा योजना खरिद गरेपछि एकपटक राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ । योजनामा विशेष जानकारी तथा सूचनाहरू राखिएको हुन्छ । यसलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ । केही त्रुटि भेटिएमा सम्बन्धित कार्यालयमा खबर गर्नुपर्छ । बिमा योजनामा शाखा कार्यालयको सम्पर्क योजनामा नै लेखिएको हुन्छ । यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत डायरीमा पनि टिपेर राख्नुपर्छ ।
४. आफ्नो बिमा योजना नम्बर सधैँ याद राख्नुपर्छ । योजनामा तपाईंको नम्बर राखिएको हुन्छ । यसलाई आफ्नो डायरीमा पनि टिपेर राख्नुपर्छ ।
५. बिमामा बिमाशुल्क महत्वपूर्ण हुन्छ । बिमाशुल्क समयमा नै भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसैले बिमाशुल्क भुक्तानी गर्ने मिति याद राख्नुपर्छ । अन्यथा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । निश्चित समयसम्म पनि बिमाशुल्क भुक्तानी नगरेमा बिमा योजना नै व्यतीत हुन सक्छ ।
६. बिमाशुल्क भुक्तानी गर्नुभन्दा पनि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सचेत हुनुपर्छ । विभिन्न बिमा कम्पनीहरूले आफ्ना बिमितहरूका लागि सुविधा दिएका हुन्छन् । कतिपय कम्पनीहरूको नियमअनुसार जुन शाखाबाट बिमा योजना खरिद गरिएको हो, सोही कार्यालयमा बिमाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यस्तै केही कम्पनीहरूले भने जुन शाखाबाट पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका हुन्छन् । त्यस्तै बैंकबाट पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका हुन्छन् । तसर्थ, आफ्नो कम्पनीको नियमबारे जानकार रहनुपर्छ ।
७. बिमा गर्दा बिमा योजनामा आफूले इच्छाएको व्यक्तिको नाम राख्न बिर्सनुहुँदैन । तपाईंको मृत्यु भएको अवस्थामा बिमांक रकम जसले पाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, उसको नाम बिमा योजनामा राख्नुपर्छ । यदि तपाईंले इच्छाएको व्यक्तिको नाम राख्नुभएको छैन भने आजै गएर राख्नुहोस् । यो कुनै पनि समयमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
बीमा नियमनका ५३ वर्ष कति गरियो, कति गर्न बाँकी छ?
सफल अभिकर्ता बन्ने ६ सूत्र, मुकुन्द भुसालको लेख
सरकारले जनप्रतिनिधिहरुको अनिवार्य बीमा गर्नु पर्छ, बीमा विज्ञ विके श्रेष्ठको नयाँ बजेटका लागि सुझाव
सुरक्षा प्रविधि र प्रणाली भित्रको बीमा व्यवसाय: सुभाष कोईरालाको लेख
मर्जरले ल्याएको तरङ्ग र छालका बाछिटाहरुः सुभाष कोईरालाको लेख